» सचिन भाइरल हुनु भन्दा अगाडी आमासंग को दुर्लभ भिडियो सार्बजनिक ! येस्ता थिए पहिला, (भिडियो सहित) सचिन भाइरल हुनु भन्दा अगाडी आमासंग को दुर्लभ भिडियो सार्बजनिक ! येस्ता थिए पहिला, (भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
सचिन भाइरल हुनु भन्दा अगाडी आमासंग को दुर्लभ भिडियो सार्बजनिक ! येस्ता थिए पहिला, (भिडियो सहित)
2021, April 20th, Tuesday
सचिन भाइरल हुनु भन्दा अगाडी आमासंग को दुर्लभ भिडियो सार्बजनिक ! येस्ता थिए पहिला,
पछिल्लो समय मा सा’माजिक सं’जाल मा निकै नै च’र्चा कमाएका सचिन परिवार को आमा पहिलो पटक मिडिया मा आएकी छिन्। सचिन को बुबा ले घरमा एउटी श्रीमती हुदाहुदै अर्को ल्या’एका हुन् भनि संचिन कि आमाले भनेकी छिन्। अहिले भने आफ्नो छोरा सचिन लाई खो’ज्दै सचिन को आमा मि’डिया सामु आएकी छिन्। सचिन आमाको का’ख बाट अ’लग भएको ७/८ महिना भएको रहेछ।
आमा मिडिया मा आए ल’गत्तै सचिन को बा’ल्यकाल को पुरानो भिडियो सा’र्बजनिक भएको। बुबा तेजेन्द्र आमा सरिता को साथ मा हुदा धेरै सुन्दर , खुशी थिए सचिन , ढुंगा गिट्टी कु’टेर भए पनि सचिन लाई प’ढाईरहेकी थिइन्। सचिन लाई हु’र्काईन बढाईन ठुलो बनाईन , तेजेन्द्र ले दोस्रो बि’बाह गरे पछि सन्तान संग अ’लग बस्नु पर्यो। दुई बर्ष सम्म श्रीमान को मा’या र स’न्तान पाउछु कि भनि दुई बर्ष सम्म कु’रिन दुवै केहि नपाए पछि सचिन कि आमा सरिता ले दोस्रो बि’बाह गरेकी हुन्।
पहिलो श्रीमान बाट माया नपाएर दो’स्रो बि’बाह गरेकी सरिता लाई अहिले पनि भ’गवान ले ठ’गे , दोस्रो बिबाह बाट पनि राम्रो हुन् सकेन। यति बेला सचिन भाइरल भईरहदा सचिन को क’माई खान आमा अहिले मिडिया मा भा’इरल भएको भन्ने हरुको लागि यस भिडियो बाट पनि सचिन लाई आमा ले पहिले देखि नै प्रयास गरेको देख्न सकिन्छ।